Lix cunto oo sababa in qofka uu ku hurdo goobtiisa shaqo | Somali National Television - sntv.so
Home MAQAALLO Lix cunto oo sababa in qofka uu ku hurdo goobtiisa shaqo
Lix cunto oo sababa in qofka uu ku hurdo goobtiisa shaqo
Muqdisho September 18 (SNTV):-Akhristow waa laga yaabaa in aad aragto adigoo Gamaayoonaya ama (lulmooday) waxaana laga yaabaa inay kugu dhacday in ku huruddo Kursigaaga shaqada.
Haddaba waxaan idin soo gudbineynaa lix cunto oo ay ku badanyihiin maaddooyinka sababa hurdada ama lulmada xilliga shaqada,waxaana ka mid ah;
Cuntooyinka hurdada keena waxaa ka mid ah caanaha, iyo caanaha oo laga sameeyo Farmaajada,Ukunta,Doolshaha iyo wixii la mid ah.
Sababta oo ah Caanaha iyo noocyadan kaleba waxaa ku jira maaddada Tryptophan,taas oo dhalinkarta maaddada serotonin oo isu beddesha melatonin,soona saarta hurdada.
Qamadiga laga sameeyo Soorta ama Cambuulada waxaa uu u wanaagsanyahay caafimaadka aroortii ee qofka laakiin sida caanaha oo kale waxaa ku jira maaddooyinka Melatonin iyo Amino Acid oo soo saara hurdada.
Cuntooyinka isku darsan waxaana ka mid ah Galleyda,Mooska,Basasha iyo cuntooyin kale oo la isku kariyo kaddibna la cuno shaqada ka hor.
Waxaa ku jira Carbohydrates, oo sababi kara in ruuxu hurdoodo ama xubnaha qofka gabaan fir fircoonida taas oo horseedi karta Gamaayada ama lulmada.
Mooska waxaa ku jirta maaddada magnesium oo aad ugu wanaagsan jirka,laakiin waxaa ay soo saari kartaa hurddo badan, sida ay lee yihiin kooxda soo saartay warbixintan oo ah dhakhaatiir ama dad ku xeeldheer arrimaha caafimaadka.
Malabka waxaa ka buuxa sokor badan,taas oo mararka qaar sababta in maskaxda fariisato,qofkana sidaas ku hurdo.
Ugu dambeyn, warbixintan oo lagu qoray wargeyska The Stander ee ka soo baxa Kenya ayaa lagu sheegay in Dhaqaatiirta ay dadka shaqeeya kula talinayaan in aysan badsan cuntooyinka horseedi kara in qofka fir fircoonida aroortii gabo,gaar ahaan xilliga ka horreeya shaqada ee subaxii ah.
W/Q Maxamedkaafi Cali Muumin
Previous articleCiraaq oo ciidamo u dirtay xuduudda Turkiga
Next articleGoormaa la qabanaya ciyaarta kama dambeysta ah ee degmooyinka Caasimadda?
Ciidanka xoogga dalka oo bur buriyay fariisimo ay Al-Shabaab ku diyaarinayeen walxaha qarxa.
Madaxweynaha Galmudug oo kulan la qaatay Haween u ololeeya doorka Haweenka+(SAWIRRO).
Ciidanka xoogga dalka oo bur buriyay fariisimo ay Al-Shabaab ku diyaarinayeen...